လမ်းချင်းတူရင် လူချင်းတွေ့မယ်…??? | Writing away with Blog.com
FacebookTwitterFlickr	ဆရာယာပိုလို	ဒသာကို ဘယ်လိုဟောမလည်း? (dasha)
Posted: 1st September 2011 by ယာပိုလို in Uncategorized
ဒသာကို ဘယ်လိုဟောမလည်း? (dasha)
ဒသာကို ဘယ်လိုဟောမလည်း မပြောခင် မူလဇာတာမှာရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တွေ အလုပ်လုပ်ပုံကို အရင်ပြောပြပါမယ် သေချာလေးဖတ်ရှုလေ့လာပေးကြပါနော် ဒသာဆိုတာနဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင်ကို တွဲမြင်ကြမှာပါ ဝိသောတ္တရီဒသာကိုပြေးမြင်ကြမှာပေါ့ အယုစန်းဗေဒင်ဟောနည်းကို အလဲထိုးခဲ့တဲ့ကောင်လေ
မူလဖွားဇာတာမှာပါတဲ့ ဂြိုဟ်တွေဟာ အတိတ်ကံကိုပြပါတယ် ထိုအတိတ်ကံတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ကောင်းကျိုး ပေးမလည်း ဆိုးကျိုးပေးမလည်းဆိုတာကို ကောဇာအဟောတို့ ဒသာအဟောတို့ နဲ့ ဟောနိုင်ပါတယ် မူလဖွားဇာတာမှာ ပါတဲ့ ဂြိုဟ်တွေဟာ သူ့အချိန်နဲ့ သူသာ အလုပ်လုပ်ပါတယ် ကျန်တဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် သူတို့ဟာ မူလဖွားဇာတာထဲမှာ သူ့ပါသူအေးအေးလေး ရပ်တည်နေပါတယ်
ဥပမာ ဇာတာရှင်ကို သတ်မယ့် ဂြိုဟ်ဟာ မူလဖွားဇာတာမှာ ပါနေပေမယ့် ချက်ချင်းကြီး အကျိုးပေးမှာမဟုတ် ပါဖူး သူ့အချိန်ကျရင်တော့ ဇာတာရှင်ကို သေအောင်သတ်ပမယ် ကျိုးအောင်ပဲ့အောင်ကန်းအောင် အလဲထိုးပါ လိမ့်မယ် ကောင်းကျိုးပေးမယ့် ဂြိုဟ်ဟာလည်း သူအလှည့်မရောက်သေးရင် အကျိုးပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရပါ တယ် အဲဒီနေရာမှာ အလှည့်ကျော်လို့မရပါဘူး အတိတ်ဘဝကံကြမ္မာ အတိုင်း မူလဖွားဇာတာမှာရပ်တည်နေကြ တဲ့ဂြိုဟ်တွေဟာ တစ်ပြိုင်နက် အလုပ်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ပါဖူး ဥပမာ ဘဝမှာ ဆေးရုံရောက်မယ့် ကံဇာတာ ပါတာကို မူလဖွားဇာတာမှာ တွေ့နိုင်ပေမယ့် ချက်ချင်း ဒီဗေဒင်လာမေးတဲ့ အချိန်မှာ ဆေးရုံရောက်မယ်လို့ သွား ဟောလို့မရပါဘူး ဒသာကို ကြည့်ရပါမယ် ပြီးတော့ ဆေးရုံတတ်ရမယ့် ဂြိုဟ်လှုပ်ရှားလာချိန် အကျိုးပေးလာချိန် ကို ဟောပေးရပါမယ် ဥပမာ တစ်နှစ်သား ကလေးဘဝအရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ရေးဂြိုဟ်တွေ ဝပ်နေရသလိုပေါ့ တစ်နှစ်သားလေးနဲ့ အိမ်ထောင် ဘယ်လိုမှ မကျနိုင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်သား အရွယ်ထဲက အိမ်ထောင်ကျမယ် မကျဖူး လူပျိုကြီးဖြစ်မယ် အပျိုကြီးဖြစ်မယ် မဖြစ်ဖူး အိမ်ထောင်ဆက်များမယ် မများဖူး လို့ မူလဖွားဇာတာမှာ ပြနေပြီးသားပါ ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် ပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂြိုဟ်တွေ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးကို ရစေတတ်တယ့် ဂြိုဟ်တွေဟာလည်း အသက် ၁၀နှစ် ကျော်မှ အလုပ်စလုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် နိုင်ငံခြားမှာကတော့ အသက် ၁၃ နှစ် ၁၀ နှစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာ အသက် ၁၀ ကျော်ကာစမှာတင် ဘွဲထူးတွေ ရတာ အသက် ၁၅ နှစ်မှာတင် တက္ကသိုလ်ပညာရေးပြီးသွားတာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့တွေ ရတာလည်း အများကြီးပါ ဒါတွေကို ကျတော့ ပုံမှန်ထက် စောပြီး ဖောက်ပြန်စွာ ဂြိုဟ်တွေက အလုပ်လုပ် ကာ ကောင်းကျိုးပေးသွားတယ် ဆိုးကျိုးပေးသွားတယ် လို့ယူဆရပါမယ် မွေးကထဲ ကဘုရင်ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်း တူတူပါပဲ ရင်ခွင်ပိုက် ဘုရင်တွေလိုမျိုးပေါ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ် ထောင်ကျတာမျိုး လည်းရှိနိုင်ပါတယ် ပုံမှန်ထက်နောက်ကျတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ် အတိတ်ကံ အလိုအတိုင်းပဲပေါ့ လူတွေက ကံကြိုတင် သတ်မှတ်ချက် နဲ့ လူဖြစ်နေရတာပါ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြပါ တစ်ကယ်တမ်း ကံက အားကြီးလာရင် အတွေးအကြံတွေလည်း အလိုလို မှား အမြင်လည်းမှားတတ်ပါတယ် မကောင်းတာလုပ်တာကို ကောင်းတယ်ထင် နေသလိုမျိုး ပေါ့ ကံကအားကြီးလာရင် လူတွေမှာ ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိကိုမရှိတော့တာပါ ပစ္စုပ္ပာန် အတိတ် အနာဂတ်တွေကို ဥာဏ်ကစားကြည့်ကြပါ ဒသာဟာလည်း ကံတရားအလိုတိုင်း ပြပေးပါတယ် ဒသာတွေ ဟာလည်းကံတရားကို မကျော်လွှားနိုင်ပဲ ဖြစ်ပျက် ပေးရပါတယ်…
ဒသာဟောမယ်ဆိုရင် ဟောမယ့် ဒသာကိုကြည့်ပါ မိမိဟောမယ့် မဟာဒသာဟာ ဘယ်ဘာဝသခင် လည်း ဘယ်ဘာဝကို ကိုယ်စားပြုလည်းကြည့်ကိုကြည့်ရပါမယ် ဘာဝနှစ်ခုကို ပိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း နှစ်ခုစလုံးကို ကြည့်ရပါမယ် သေချာမှတ်ထားဖို့က မဟာဒသာကြီးကို အရင်ကြည့် ပြီးရင် အန္တ ရဒသာကိုကြည့် ပြီးတော့မှ လပိုင်းနဲ့ ဟောချင်တယ်သပဆိုရင် ပြအန္တရဒသာကိုပါ ထပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် အဓိကကတော့ မဟာထူလဒသာ နဲ့ အန္တဒသာပါပဲဗျာ မဟာထူလဒသာကြီးက အချုပ် သူ့အောက်ကအန္တ ဒသာတွေက ဆင့်ပွားတွေ ပေါ့ တစ်နှစ်စာ ကောင်းကောင်းဟောလို့ရပါတယ် မိမိမူလဖွားဇာတာမှာ စားနေတဲ့ ဒသာဟာ ဘယ်ဘာဝသခင်လည်း မာရဏ ဗျာယ အာရီ သခင်တွေလား လာဘ ပုတြ သုဘ လဂ်သခင်တွေလား အားကောင်းလား အားရှိလား နိစ် ပြ ရန် မာရက လွတ်ရဲ့ လား ဥုစ် ကသစ် မိတ် ယောဂကာရက တြိဂုဏ်း ဝဂုတ္တမနဝင်း ရလား ဘယ်ဘာဝမှာသွားရပ်နေကြလည်း ဘယ်ဂြိုဟ်မြင်လည်း ကြည့်ပြီးရင် ကောင်းဆိုး ဟောလို့ရပါပြီ အားကို အရင်စစ် ဘယ်အတန့်ဘာဝ လည်းဆိုတာစစ် ဘယ်အတန့်ဘာဝတွေ နဲ့ ပတ်သတ်နေသလည်းဆိုတာကိုပါစစ် ပြီးတော့ မှ ကောင်းဆိုးဟောပါ ဒါဟာ အလိမ်အညာမပါတဲ့ ဟောကွက် အရှင်ထုတ်နည်းတွေပါ ဗေဒင်ကျမ်းတွေ ထဲက ပုံသေဒသာ ဟောကွက်တွေ နဲ့ တော့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဥပမာ မိဿလဂ် ရဲ့သောကြာမဟာဒသာကို ကြည့်ကြမယ်ဗျာ မိဿလဂ်အတွက် သောကြာဂြိုဟ်က မာရက ကိုယ်တိုင်သတ်တတ်တယ် လူကိုမကျန်းမာစေပေမယ့် စီးပွားရေး ပစ္စည်းဥစ္စာကံကောင်းတတ်တယ် ပတနီအိမ်ရှင် ဖြစ်လို့ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ လူလွတ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျတတ်တယ် အိမ်ထောင်ကျပြီးသားဆိုရင် ဇာတ်လမ်းများတတ်တယ် သောကြာမဟာဒသာအောက်မှာ အာရီသခင် ၄ဟူးအန္တ ရဒသာစားရင် အာရီဘာဝအဟောအတိုင်း အမှုအခင်း ကျန်းမာရေး ရန်သူတွေ ကြွေးမြီတွေကို ဟောရမယ် ပတနီမဟာဒသာအောက်က အာရီသခင် အန္တရမို့ ဇနီးမယားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမှုအခင်း ကျန်းမာရေး ရန်များတတ်တာ ကြွေးမြီကိစ္စတွေ ဇယားရှုပ်တတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် သောကြာမဟာဒသာ အောက်မှာပဲ ၄တန့် ဗန္ဓု ဘာဝသခင် အန္တရဒသာစားမယ်ဆိုရင် ဇနီးမယားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ယာဉ်ကား အိုးအိမ် မိတ်ဆွေ ယောက္ခမ တို့တွေက ကောင်းကျိုးပေးမယ်ပေါ့ဗျာ မဟာဒသာက ပတနီ အိမ်ရှင်စားနေတာမို့ မိန်းမ အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ အဟောတွေ မလွတ်တာ မြင်ကြမှာပါ အန္တရအဟောတွေကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဟောသွားတာလည်း မြင်ကြမှာပါ သောကြာဒသာ အောက်က ကမ္မဘာဝသခင်အန္တရဒသာ ဆိုရင် ဇနီးမယာအလုပ်အကိုင် ကောင်းမယ် ဇနီးမယားနဲ့ပူးပေါင်းပြီး မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက် အလုပ်လုပ်တာမှာ အောင်မြင်မယ် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကောင်း မယ် သောကြာဒသာမှာပဲ ၁၁ တန့်ဘာဝသခင် အန္တရဒသာဆိုရင် အမြတ်အစွန်းတွေ များလာပါမယ် ကောင်းတယ်ပေါ့ အားရှိအားမဲ့ ကို အရင်စစ်ပါ မဟာဒသာရော အန္တရဒသာကိုရော စစ်ပါ ဘယ် ဘာဝသခင်တွေ ဆိုတာကိုလည်းကြည့်ပြီး ဟောပြောကြပါနော် အခု ဟောပြထားတာက အကြမ်းစားပါ ဥာဏ်ပညာကို ချဲ့ ထွင်းနိုင်ကြပါစေ ဂြိုဟ်မြင်တွေကိုလည်း စစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ မကောင်းတဲ့ ဂြိုဟ်မြင်တွေရှိနေရင် ဒသာကုန်ဆုံးခါနီးမှ ခွေးကျကျတတ်တယ်….
မဟာဒသာ ဟာ အချုပ်ဖြစ်ပါတယ် အဟောအတွက် မသုံးပါဖူး ဘာကိုဟောရမယ်ဆိုတာ ကြည့်ရတဲ့ အချုပ်ပါ နှစ် ကာလများစွာ ကြာရှည်တတ်ပါတယ် သူ့အောက်မှ အန္တရ ဒသာများစွာစားမှာပါ
အန္တရဒသာ တစ်နှစ်စာအဟောများအတွက် ( သူ့အောက်မှာ ပြအန္တရ ဒသာများစွာစားမှာပါ သူဟာ ပြအန္တရအတွက် အချုပ်လည်းဖြစ်တယ့်အပြင် သူ့ကို လည်း အဟောထုတ်ကို ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ် ထုတ်ပေးရပါမယ် )
ပြအန္တရဒသာ လပိုင်းအဟောများအတွက် အဟောမထုတ်လည်းရပါသည်
ကောင်းတဲ့ ဒသာကြီးမြန်မြန်စားပါစေ အခုစားပါစေဆိုပြီး လုပ်လို့မရဘူး မကောင်းတဲ့ ဂြိုဟ်ကြီး ဒသာစားနေရာကနေ မြန်မြန်လွတ်ပါစေ မြန်မြန်ကုန်ပါစေ လုပ်လို့မရဘူး ဟိုဒသာလေး အရင်လာပါ ဒီဒသာလေး နောက်ဘဝမှ လာစားပါစေလည်း လုပ်လို့မရပါဘူးဗျာ
စာရေးသူ အခုရေးတင်မယ့် ပို့စ်ကတော့ ယုဂ်များအကြောင်းပါပဲ ဆရာတစ်ယောက်က သင်ကြားပေးဖူးတာက တော့ ဂြိုဟ်နှစ်လုံး ပူးရင်တောင် ယုဂ်ရပါသတဲ့ တစ်ခြား မြင်တာ ယှဉ်တာ ပူးတာတွေ ဆိုရင်တော့ ပြောမနေ ပါနဲ့တဲ့ စာရေးသူဟာ ဆရာတစ်ယောက်ရေးတဲ့ ယုဂ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျမ်း အကြောင်း စကားစပ်လို့ ပြောမိ ရင်းနဲ့ပေါ့လေ ၃ဂါ၅တေး ပူးတာမျိုး ဂုရုမင်္ဂလာယုဂ်လားမသိ ၂လာ၅တေးပူးတာမျိုး စန္ဒြဂုရုယုဂ် ၁နွေ၎ဟူးပူးတာမျိုး ဗုဒ္ဓဓိတျယုဂ်ပေါ့လေ အဲ့ယုဂ်ကတော့ လူသိတော်တော်များပါတယ် ခဏခဏလည်း ပူးတတ်လို့ပါ ဒီနေရာမှာ ဗုဒ္ဓဓိတျယုဂ်က ခဏခဏ ရနေကြတော့ ပေါပေါလောလော ယုဂ်ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ် ဒါကြောင့် စမ်းစစ်ဖို့ လိုလာပါပြီ ဆရာ ကြီး တွေက ဆုံးဖြစ်ပေးခဲ့ကြတာက တစ်ခြား ရာသီတွေမှာ ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဓိတျယုဂ်ဟာ အကျိုးပေးမထက်သန်ပါဖူး မစစ် ပါဖူးတဲ့ တကယ်စစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဓိတျယုဂ်ကို ၁နွေကသစ်ရတဲ့ သိဟ် ရာသီနဲ့ ၄ဟူးဥစ်ကသစ်တြိဂုဏ်းရတဲ့ ကန်ရာသီမှာ သာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ ဆိုလိုတာက သိဟ်ရာသီမှာ ၁နွေ၎ဟူးပူးတာမျိုး ကန်ရာသီမှာ ၁နွေ၎ဟူးပူးတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ အဲ့ဒီရာသီနေရာတွေမှာ ပူးမှသာ ဗုဒ္ဓဓိတျယုဂ်အမှန်ပါတဲ့ အကျိုးပေးလည်း ထက်သန်မှာပါတဲ့
ဂြိုဟ်ပူးလို့ ဖြစ်တဲ့ ယုဂ်တွေ ၂ လုံး ပူးပူး ၇ လုံးပဲ ပူးပူး ၈လုံးပဲ ပူးပူး အမြင်အယှဉ်ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ထားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ယုဂ်တွေပဲဖြစ်စေ ဟာ သောင်းချီရှိပါတယ်တဲ့ အဓိကပင်မယုဂ်ကနေ ခွဲဖြာဆင်း သက်လာတဲ့ ယုဂ်တွေဆိုတာလည်း မနည်းပါဘူး ယုဂ်ပေါင်း ၁၀၀၀ စာအုပ်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ် ဒီနေရမှာက ဆရာ့ဆရာ အဆင်အဆက် လက်ခံထားတာတစ်ခုရှိပါတယ် မူလဖွားဇာတာမှာ ဥုစ် ကသစ် တြိဂုဏ်း ဝဂုတ္တမနဝင်း(မြတ်သောနဝင်းဟုလည်းတစ်ချို့ ခေါ်ကြပါသည်) မိတ်အိမ် ယောဂကာရကတို့ရတာတွေထက် ယုဂ်ကောင်းရတာတွေကို ပိုပြီး အလေးအမြတ်ထားကြပါသတဲ့ ပြောချင်တာက မူလဇာတာမှာ ဂြိုဟ်တွေ တစ်လုံး ချင်းစီ အားကောင်းနေတာထက် ဂြိုဟ်အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ထားလို့ ရလာတဲ့ ယုဂ်က ပို အဖိုးတန်တယ်ပေါ့ဗျာ
မူလဖွားဇာတာတွေမှာ ဂြိုဟ်တွေ တစ်လုံးထဲ အားကောင်းနေတာ မကောင်းဖူးလား ဥပမာ ဥုစ် ၄ လုံးရတဲ့ ဇာတာမျိုး ကသစ် ၃ ပွင့်ရတဲ့ ဇာတာမျိုးတွေပေါ့ မေးစရာရှိလာတာက အဲ့ကောင်တွေ ရတာမကောင်းဖူးဆိုတာ လား? မျိုးပါပဲ မဟုတ်ပါဖူး ကောင်းပါတယ် ကောင်းပေမယ့် တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကိုယ်ရ တစ်သီးပုဂ္ဂလကောင်းတာမျိုးတွေပါ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန် အားကောင်းနေတာမျိုးတွေပါ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုကို ကြားဖြတ်ပြောပါရစေ အနောက်တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒင်တွေမှာ conjunction ခေါ် သဗ္မန္ဓ နဲ့ ဟောကြားပေး နေသူတွေအများကြီးပါ လဂ်လည်းမလိုပါဘူး ဒီအတိုင်းကိုင်နေကြတာပါပဲ မှန်လည်းမှန်နေကြ တာပါပဲ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဂြိုဟ်တွေ အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဆက်နွယ်နေတာကို ကြည့်ပြီး ဟောကွက်ထုတ် ကြတာပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲ့ဒီနည်းစနစ်နဲ့ ဟောနေတဲ့ ဆရာတွေကို မတွေ့ဖူးပါ ရှိမယ်လည်းမထင် ပါ
ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းမှာ Teamwork ကအဓိကပါ အသင်းကြီးတွေ Teamwork ပျက်ရင် ကစားသမား ကောင်းတွေ ဘယ်လောက်ပါပါ အသင်းသေးတွေကို ရှုံးတတ်ပါတယ် မိမိမူလဖွားဇာတာမှာ ဂြိုဟ်တွေ ဥုစ် ကသစ် မရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့ ယုဂ်ကောင်းတွေ ရထားရင် ဘုရင်တောင် တတ်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ခင်ဗျ ဒါဆိုမေးစရာရှိလာတာက နာမည်ကြီးကစားသမား ကစားအားကောင်းတဲ့ ဘောလုံးကစားသမားတွေ မလို ဘူးလားဆိုတော့ လိုပါတယ် ရရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ အကျိုးမပေးပဲနဲ့တော့ မနေပါဘူး အကျိုးပေးမှာပါ ဒါပေမယ့် စည်လုံးချင်းသည် အင်အား တစ်ယောက်အားဖြင့် ယူသောမရ အများအားဖြင့် ယူသော်ရ၏တို့ ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါမယ် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် လုပ်ချင်တာလုပ်နေတဲ့ အသင်းမှာ မက်ဆီ ရောနယ်ဒို ရွန်းနေ ပါနေလည်း နိုင်ဖို့ အသင်းကောင်းဖို့ မသေချာပါဘူး ဒါပေမယ့် သူတို့ ပါတဲ့အတွက် ကောင်းနေရမှာကတော့ ကောင်းနေမှာတော့ သေချာပါတယ် ဒီလိုပါပဲ မူလဖွားဇာတာမှာ ဂြိုဟ်တွေ ဥုစ် ကသစ် တြိဂုဏ်းရတာဟာ မကောင်းပဲနဲ့တော့ မနေပါဘူး ဒါပေမယ့် ယုဂ်ကောင်းတွေ ရထားတာက ပိုအကျိုးပေးမှာပါ စိတ်ချ ယုံကြည်လို့ရပါတယ်
ယုဂ်ဆိုတာ သိုင်းချတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာဆိုရင် combo attack ပေါ့ အရမ်းကောင်းတယ် စည်းလုံးချင်းသည် အင်အား ပေါ့ အရမ်းအားရှိလာမယ် တစ်လုံးထဲ သီးခြာစီနေနေကြတဲ့ ဂြိုဟ်တွေထက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ဂြိုဟ်တွေက ဇာတာရှင်ကို ကောင်းကျိုးများစေပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် ဇာတာတစ်စောင်မှာ ဥုစ် ကသစ် မိတ် အစရှိသဖြင့် ကောင်းတာတွေ မမြင်တာနဲ့ မကောင်းမဟောကြပါနဲ့ အုံး ယုဂ်တွေကိုလည်း စိစစ်စွာ စစ်ဆေး သင့် ပါတယ် ဒါမှ အဟောမှန်ကန်နိုင်မှာပါ ယုဂ်အကြောင်းကို နေပြည်တော်ကနေ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှ သေချာ ကျမ်းစာအုပ်တွေနဲ့ ညှိပြီး သေချာ ထပ်ရေးပြပါအုံးမယ်
ဇာတာတော်ပုံရာဇဝင်မှာ ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက် ထင်ရှားသော မင်းတို့၏ဇာတာများ စေတီပုထိုးတည် ချိန်များ မြို့ တည်ဇာတာများ အဖြစ်အပျက်ဇာတာများကို စုစည်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောကျမ်းဖြစ်ပါသည် ဤကျမ်းကို အဇာဂရုပုဏ္ဏားက မင်းရဲကျော်ထင်လက်ထက် (၁၆၇၃-၁၆၉၈) အတွင်း ရေးသားပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏
ဇာတာတော်ပုံရာဇဝင် မူလပေမူကို မတွေ့ရှိရတော့ပေ မူလပေမူမှ ကူးယူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသော လက်ရေး မူနှစ်စောင်ကို ကမ္ပည်း ကျောက်စာ ဌာန စာကြည့်တိုက် နှင့် ပုဂံမြို့ တို့တွင်တွေ့ရှိရရာ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရှေး ဟောင်း သုတေသန ညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံးမှ ယဉ်ကျေးမှုအထက်တန်းအရာရှိ ဦးလှတင်က မူနှစ်ခုကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ ဇာတာတော်ပုံရာဇဝင်အမည်ဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့၏ ဇာတာတော်ပုံရာဇဝင်ဆိုသည့်အတိုင်း သမိုင်းကြောင်းအချက် နည်းပါးပြီး ကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံး ဇာတာများဖြင့် သာ ပြည့်နှက်နေပါသည် ရှေးဟောင်း သုတေသန (ယခင်ကမ္ပည်း ကျောက်စာဌာန) စာကြည့်တိုက် လက်ရေးမူတွင် မင်းဆက်ဇယား၌ နရာဝရမင်းအထိဖော်ပြ ထားပြီး သမိုင်းကော်မရှင်က ပုဂံမြို့ မှ တစ်ဆင့် ကူးယူခဲ့သည့် လက်ရေးမူတွင် ဇာတာများကို ပင်းတလဲမင်းအထိ ဖော်ပြထားပါသည် အကြောင်းအချက်များအနေဖြင့် ကုန်းဘောင်ခေတ်ဆင်ဖြူရှင်လက် ထက်တိုင် ဖော်ပြထားရာ နှောင်းခေတ် ရာဇဝင်ဆရာများ၏ ဖြည့်စွက်ချက်ပင် ဖြစ်၏
ဇာတာတော်ပုံ ရာဇဝင်တွင် မင်းဆက်များအဖြစ် တကောင်းမင်းဆက် ၁၅ ဆက် သရေခေတ္တရာ ပထမဆက် ၂၇ ဆက် ဒုတိယဆက် ၂၀ ဆက် ပုဂံမင်းဆက် ၅၅ ဆက် ပင်းယမင်းဆက် ၇ ဆက် စစ်ကိုင်း မင်းဆက် ၇ ဆက် တို့၏ အမည်များဖော်ပြထားပါသည် ဇာတာအနေဖြင့်မူ ဘုရားပုထိုးတည် မြို့ တည် မြန်မာ ဘုရင်များနှင့် အဖြစ်အပျက်ဇာတာများကို တွေ့ရှိရ၏ အချို့ သောဇာတာများတွင် နှစ် လ ရက် နေ�